Ahịa Email niile nke Sizzles abụghị Spam | Martech Zone
Ihe omuma a site na LeadPagesnwere ngwọta peeji nke, na-enye ụfọdụ nghọta dị omimi banyere ahịa email na ọnụ ọgụgụ SPAM. Igodo nke ihe omuma a bu otutu ozi ịntanetị ziri ezi na-abanye na folda junk. Ohere bụ na ebe ọtụtụ n'ime gị nọ, kwa.
Ikike-dabere na email-aga n'ihu na-eduga mkpọ na ịrịba pịa-site na akakabarede udu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-etinye ike ha niile iji nweta usoro ịzụ ahịa iji chụpụkwuo okporo ụzọ na ha echefuru ụzọ ijide ndị ọbịa ahụ n'ezie mere mee ya na saịtị. Tinye ụdị ndebanye aha ka i wee jide ndị ọbịa ahụ nwere mmasị, ma ziga ha ozi mgbe ohere ruru.
Na mgbe ị chepụtara ma zipụ ozi ịntanetị ndị ahụ, jiri usoro kachasị mma:
Anyị bụ ndị mmekọ nke LeadPages na nke ahụ bụ njikọ anyị na post a!
Tags: emailemail Marketingemail njakịrịjunk nchekwaspam
Dee 9, 2013 na 10: 10 AM
Douglas, Akụkọ na-akpali mmasị. Site n'inwe ọdịnaya dị mma, Usoro Isi Okwu na Oku doro anya na Omume nwere ike ịme ihe dị iche. eMail ga-anọgide na-na ndị dị ọnụ ala mode nke advertisement.
NetGains Teknụzụ Pvt Ltd.